Go to water play ground – Thet Nandar
Posted on November 8, 2009 by Thet Nandar
Angel and Heaven are going to bathe in the water play ground this afternoon.
Angel’s on the turtle.
Angel’s under the mushroom.
Angel ( red T-shirt ) & Heaven ( white T-shirt )
I’ll show you, one of the sand picture.
Now paint in the cat.
I can jump in the play ground when i’m 16 months old boy.
I like swimming in this pool.
video : http://video.google.com/videoplay?docid=5426209186721246501#
April – 8, 2009 (Wed) နေ့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်က ဗန္ဒုလ တံတားအဆင်းမှာ ဖွင့်တာ သိပ်မကြာသေးတဲ့East Point Shopping Mall ကိုသွား။ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ရေကစားတဲ့နေရာနဲ့ play ground ရှိတော့ သား နဲ့ သမီး ကတော့ အလွန်ပျော်ပေါ့။ ပီးခဲ့တဲ့ sunday က တခါ။ ဒီနေ့ wed တခါ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် သူတို့ကို ၂ကြိမ်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ သမီးက ရေကစားရတာ သဘောကျလို့ စင်္ကာပူက wild wild west က ကလေးတွေ ရေကစားတဲ့ နေရာက ပုံစံနီးပါးလောက်ကို ရေကစားရတာ နည်းနည်းလေး တူတယ်ဆိုတော့ ကလေးတွေ ပျော်မယ်ဆိုလည်း ပျော်လောက်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်ပုံစံ ရေပန်း၊ မှိုပုံစံရေပန်း၊ စက်ဝိုင်းပုံစံရေပန်း၊ လိပ်ရေပန်း၊ ဂျိုကာရေပန်း လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ တော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ အ၀တ်လဲဖို့လည်း အဆင်ပြေတယ်။ အိမ်သာအိုးလေးတွေက ကလေးထိုင်လေးတွေ သေးသေးလေး။ အ၀တ်ထည့်တဲ့ ဘီဒိုကလည်း သော့ပါ locker လေးတွေ စင်ကာပူက science center ကတော့ coin ထည့်မှပဲ သော့ခတ်လို့ရတာ။ ဒီမှာတော့ အလကား။ သားလေးကို စင်ကာပူ လိုက်ပို့ပေးရအုံးမယ်။ wild wild west , science center ရောက်ရင် သားလေး အရမ်းပျော်မှာ။
Nextမြန်မာကြက်သား နှင့် အားလူးဟင်း